लकडाउन Rajdhani News लकडाउन
लकडाउन खुकुलो : के खुल्ने, के नखुल्ने ?
काठमाडौं । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रबाट लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारलाई दबाब आएपछि सरकारले यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न बाध्य भएको हो । निजी तथा
जेठ २९ गते, २०७७ १५:०२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । आज अपरान्ह मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बस्ने
जेठ २८ गते, २०७७ १७:१९ मा प्रकाशित
यसकारण लकडाउन खुकुलो पार्न सरकारलाई डर
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई पछिल्लो समय केही खुकुलो बनाउनुपर्ने दबाब आएपनि सरकारले भने यस विषयमा अलमल गरिरहेको छ । केन्द्र
जेठ २६ गते, २०७७ १५:०६ मा प्रकाशित
व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी लकडाउन मोडालिटी तयार हुन्छ : मन्त्री भट्ट
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग आज उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनबारे छलफल गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सलगायतसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीले
जेठ २३ गते, २०७७ २२:०१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । जसका लागि सरकारले निश्चित मिति तोकेर विभिन्न चरणमा राखेर परिवर्तन गरिने बताइएको छ । कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)
जेठ २३ गते, २०७७ १२:०९ मा प्रकाशित
लकडाउनलाई कडाइ गर्न उपत्यकाका प्रजिअको निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले लकडाउन कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन देशैभर पछिल्लो समय लकडाउन उल्लंघन गर्ने क्रम बढेपछि काठमाडौं, भक्तपुर र
जेठ २२ गते, २०७७ १५:१० मा प्रकाशित
लकडाउनको नयाँ मोडालिटीले अन्तिम रुप पाउँदै
काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । देशभरका विभिन्न स्थानमा लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेपछि सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने दबाबमा छ ।
जेठ २२ गते, २०७७ १२:३९ मा प्रकाशित
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन होला ?
काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको लकडाउनका विषयमा छलफल गर्न आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अपरान्ह ४ बजे बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा जारी लकडाउनको मोडालिटी
जेठ २२ गते, २०७७ १२:०२ मा प्रकाशित
लकडाउन धमाधम उल्लंघन : सरकार के गर्ला ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन अन्ततस् असफल सावित हुँदै गएको छ । लकडाउनको अवधिमा नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु निरन्तर बढिरहेका छन । भारतका नाका हुँदै नेपाल प्रवेश
जेठ २१ गते, २०७७ १५:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । केही व्यवसायीले जिल्ला–जिल्लाबाट लकडाउनको अवज्ञा गर्न थालेपछि सरकार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मंगलबार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको बैठकले निजी क्षेत्रसँग परामर्श
जेठ २१ गते, २०७७ १३:१३ मा प्रकाशित
लकडाउन लम्बिएपनि खुकुलो बनाइँदै
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउन यथावत राखेको छ । तर अब लकडाउन हिजो जस्तो कडा भने हुने छैन । यसको मोडालिटी परिवर्तन हुने सम्भावना देखिएको छ ।
जेठ १८ गते, २०७७ १६:३१ मा प्रकाशित
लकडाउनले मात्रै जनता सुरक्षित होलान् ?
काठमाडौँ । लकडाउन अर्थात् ताल्चा लगाउने काम । कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको खण्डमा त्यो परिस्थितिबाट बच्नका लागि अपनाइने सजिलो उपाय । यो अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवाहरू तोकिएको समयका
वैशाख २५ गते, २०७७ ०७:४१ मा प्रकाशित
आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ८ दिन लक डाउन लम्ब्याएर चैत्र २६ सम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो ।
चैत १६ गते, २०७६ १८:३३ मा प्रकाशित
यसरी बन्दैछ लक डाउन २१ दिनसम्म लम्ब्याउने सरकारको तयारी
नेपाल सरकारले लक डाउन २१ दिन सम्म लम्ब्याउने तयारी थालेको छ ।
चैत १५ गते, २०७६ ०८:२७ मा प्रकाशित